कानूनअनुसार कारबाही गर्ने पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्छ » छलफल
कानूनअनुसार कारबाही गर्ने पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्छ
हामीले हाम्रा काम र जिम्मेवारीलाई गम्भीरताका साथ लिएर
अनुशासित ढंगले काम गरिरहेका छौं । यसका लागि सरकारले
स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका
काम स्रोत साधनले भ्यायसम्म तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउनु
पर्छ, कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर रूपले लाग्नु पर्छ, राज्यका
हरेक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर तीव्रताका साथ काममा
अगाडि बढ्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्नुपर्छ, राम्रो काम
गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था कडाइका
साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै
मोलाहिजा गर्नु हुँदैन, कामको परिणाम कति आयो, कति आएन
त्यसको अनुगमन गरेर गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने
पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका समस्या के
छन्, त्यसका उपाय के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि सरकारले
ध्यान दिनुपर्छ ।
रवि कुमार पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक, ट्राफिक महाशाखा
ट्राफिक महाशाखाले आफ्ना कामहरू के कसरी गरिरहेको छ ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यअन्तर्गत यो महाशाखाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ । जसमा मापसे चेक जाँचलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कडाइका साथ काम गरिरहेका छौं । सवारीमा लेन अनुशासन कडाइका साथ लागू गराइरहेका छौं । लेन अनुशासन भएन भने सवारी दुर्घटना बढ्छ, त्यसले जनतालाई पनि क्षति पुग्छ, सडकमा जाम पनि धेरै हुन्छ र ट्राफिक प्रहरीलाई पनि समस्या पार्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले लेन अनुशासन कामय गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । त्यसले यस्ता कुरामा न्यूनीकरण भइरहेको छ । त्यसैगरी चालकहरूले लापरवाही गर्ने, मोबाईलमा कुरा गरेर सवारी चलाउने, सिटबेल्ट नबाँध्ने, गाडीका ढोकाहरू खुल्ला गरेर र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, जहाँ पायो त्यहीँ सवारी रोक्ने, बटुवाले बाटो काट्दा जथाभावी बाटो काटिदिने, फुटपाथमा पसल राखेर बाटो साँगुरो पारिदिने र बटुवालाई असजिलो बनाइदिने, आकाशेपुलबाट नहिँडिदिने, जेब्राक्रसबाट बाटो नकाटिदिने जस्ता कुरालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिरहेका छौं । यस कार्यमा हाम्रो जनशक्तिले नभ्याइरहेका हुँदा ट्राफिक भोलण्टियर्स खटाएर यस्ता कुरालाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । यसमा हामीले दसैँ तिहारमा ५ सयजना भोलण्टियर्स खटाएर काम ग¥यौं भने अहिले ४ सयजना थपेर योजनागत रूपले काम गरिरहेका छौं । यसको प्रचार प्रसार गर्नेदेखि जनचेतना फैलाउने काम विभिन्न कार्यक्रममार्फत गरिरहेका छौं । मापसे गरेर सवारी चलाउनेलाई लाइसेन्स लिएर १ घण्टा क्लाससहित कारबाही गरेर छोड्ने गरेका छौं । यसले धेरै समस्याको समाधान गरेको छ । अहिले उपत्यकामा पार्किङ स्थानहरू पर्याप्त नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा ज्यादै समस्या भएको छ । मानिसहरूले सडकमा जथाभावी पार्किङ गरिदिँदा सवारी आवागमनमा ज्यादै समस्या भएको छ, यो हाम्रा लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले हामीले हुईल लगको व्यवस्था गरेर कारबाही गर्ने गरेका छौं । मोटरसाईकलाई नगरपालिकाका प्रहरी लगाएर मोटरसाइकल समातेर नियन्त्रण गर्ने गरेका छौं । यो कुरालाई ध्यान दिएर अहिले हामीले केही करिडोर र पार्किङ स्थलहरूको व्यवस्था गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । त्यसले हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं । त्यसैगरी उपत्यकामा सबैभन्दा बढी जाम हुने कलंकी–नागढुंगा खण्डमा गाडी बिग्रिँदा तत्काल उठाएर लान सक्ने ठूला भारवहन सवारी तान्ने ¥याकर क्रेन लगेर राखेका छौं । त्यसले कुनै पनि सवारी बिग्रियो भने तत्काल उठाएर लैजान्छ र जाम हुनबाट जोगाउँछ । अब हामीले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ सहज र प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन हाम्रा स्टेक होल्डरबाहेक विभिन्न संघ संगठन, पार्टीका जनप्रतिनिधि, पेसा व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराई अन्तर्संवाद र छलफल गराई यस्ता कार्यमा न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसैगरी उपत्यकामा सञ्चालन हुने टिपरहरूले बढी दुर्घटना गरेको पाइएकोले त्यसलाई चक्रपथभित्र राति ८ बजेपछि र बिहान ६ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैगरी सडक बत्तीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । गाडीमा नम्बर प्लेटहरू ठूलो पारेर राख्ने, लुकिङ ग्लासहरू राख्ने, जथाभावी सवारी सञ्चालन गर्नेलाई र अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई सहजै नियन्त्रणमा लिन सकिने गरी सीसीटीभी क्यामेराहरू जडान गर्ने, प्रदूषित सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने, ठूलो आवाज बजाएर सवारी चलाउने र नक्कली परीक्षार्थी बनेर सवारी लाईसेन्स लिन जानेहरूलाई कारबाही गर्ने, सवारी जहाँ पायो त्यहीँ रोक्न नदिने निर्धारित ठाउँमा मात्र रोक्न दिनेलगायतका काम गरी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र भरपर्दो बनाउने कार्य ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गरिरहेको छ ।
उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न चुनौती के के छन् त ?
चुनौती धेरै छन्, त्यसमध्येको मुख्य चुनौती राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम र विरोधका कार्यक्रम जथाभावी गरिदिने हो । त्यसले दिनभरि नै ट्राफिक जाम गर्छ । त्यसपछि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था छैन, सडकहरू साँगुरा छन्, खाल्डाखुल्डी बढी छन्, हिलो, धुलो बढी हुने छन्, अण्डरपास सडक छैनन्, आकाशेपुलहरू छैनन्, सबै ठाउँमा फुटपाथ, जेब्रा क्रस, पार्किङ छैनन्, पैदलयात्रीले निश्चित ठाउँबाट बाटो काटिदिँदैनन्, सवारी चलाउनेले अनुशासन उल्लंघन गरिदिने, वैकल्पिक मार्गहरू नहुने, हामीलाई आवश्यक जनशक्ति नहुने, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम, धर्ना, जुलुस जथाभावी गरिदिनेजस्ता मुख्य चुनौती हाम्रा सामु छन् । तथापि, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै भएको स्रोत साधनबाटै ट्राफिक प्रहरी रातदिन खटेर न्यूनीकरण गरिरहेका छौं ।
सवारी सञ्चालकहरूले ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी कारबाही गर्छ, पैसा माग्छ नदिए लाईसेन्स लैजान्छ, दुःख दिन्छ भन्छन् नि हो ?
यो अनुशासनमा सवारी नचलाउनेलाई अनुशासनमा राख्न खोज्दा उनीहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई लगाउने आरोप हो, यसमा कुनै सत्यता छैन । जसले ट्राफिक अनुशासन उल्लंघन गर्छ, कारबाहीमा पर्छ अनि उसले रिसले भन्ने भनाइहरू हुन् यी । सडकभरि सीसीटीभी क्यामेरा छन्, त्यस्तो गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्र छ, क्यामेरासहितका टेलिफोन हातहातमा छन्, कसैले त्यस्तो बदमासी गरे तत्काल कारबाही हुने ऐन कानुन छ, हाम्रो संगठनले यस्ता कार्य गर्नु हुँदैन भनेर तालिम दिएको छ, त्यसको परिपालना सबै ट्राफिक प्रहरीले गरे नगरेको हेर्ने, अनुगमन गर्ने हाम्रो संयन्त्र छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो काम कुनै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन् । पहिले पहिले एकाधले गर्दा त्यस्तालाई हाम्रो संगठन प्रमुखले कारबाही गरेको सुन्नुभएको होला । त्यसैले यस्ता गतिविधि अहिले हुन सक्दैनन् कथम् भएको खण्डमा तत्काल एक्सन हुन्छ । फेरि अनुशासन उल्लंघन गर्दा कारबाही भएको सवारी चालकबाट ट्राफिक प्रहरीले केही पाउने भए पनि लौ त्यसो गरेकि भन्नु त्यस्तो फाइदा त हुँदैन, कारबाही गरेवापतको जरिवाना त सरकारी कोषमा जम्मा हुने हो । त्यसैले यस्तो काम प्रहरीबाट हुँदैन, गल्ती गर्ने सवारीचालकलाई ट्राफिक प्रहरी कारबाही गर्दा उनीहरूले रिसले भन्ने गरेको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
यी सबै कामलाई हल गर्दै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो बनाउन र नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न के गर्नु पर्ला सुझाव के दिनुहुन्छ ?
सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रममा ट्राफिक महाशाखाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नै । त्यही भएर हामीले हाम्रा काम र जिम्मेवारीलाई गम्भीरताका साथ लिएर अनुशासित ढंगले काम गरिरहेका छौं । यसका लागि सरकारले स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम स्रोत साधनले भ्यायसम्म तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ, कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर रूपले लाग्नु पर्छ, राज्यका हरेक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर तीव्रताका साथ काममा अगाडि बढ्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै मोलाहिजा गर्नु हुँदैन, कामको परिणाम कति आयो, कति आएन त्यसको अनुगमन गरेर गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका समस्या के छन्, त्यसका उपाय के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छ, जसले गर्दा ट्राफिक समस्या न्यूनीकरण भइरहेका छन् । यसमा अझ ध्यान दिनुपर्छ, आकाशेपुल निर्माण अण्डरमार्ग निर्माण, लाइटिङको व्यवस्था, सडकहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ । बाहिरबाट आउने सवारीलाई उपत्यका छिर्दा सफा गरेर छिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो भएमा उपत्यकामा फोहोर र धुलो कम हुन्छ साथै यहाँका सडकहरू पनि सबै पिच गर्न तत्काल निर्देशन गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारको काम भयो भने सरकारको अभियान पनि पूरा हुन्छ, उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि व्यवस्थित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।